Amanani amaninzi amaninzi kunye namaqhezu zibhalwa ngokufanayo
Amanani omiselweyo (le nombres ordinaux ) asetyenziselwa ukubonisa isikhundla okanye isikhundla, ngamanye amagama, amanani omnxeba asetshenziselwa ukuyalela, ngokuchasene namanani ekhadikhadi, asetyenziselwa ukulungiselela.
Uninzi lweenombolo zomgca zaseFransi kunye namaqhezu ( ii-fractions ) zibhalwa ngokufanayo. NgesiNgesi, bafana "besithathu" phezulu, ngelixa ngesiFrentshi baqala ukuqala nge- cinquième .
kuqala 1 1
Isibini sibini 2 2e 1/2, isiqingatha unemizuzu,
/ la moitié
Isithathu troisième Yesithathu 3e 1/3 unesithathu
Isine quatrième 4 4e 1/4 i quart
Isihlanu yesihlanu 5 5e 1/5 unesihlanu
Isithandathu yesithandathu 6 6e 1/6 yesithandathu
Isixhenxe septième Wesi-7 7e 1/7 un septième
Isibhozo huitième 8 8e 1/8 unyuiti
Isithoba neuvième 9 9e 1/9 un neuvième
Ishumi dixième 10 10e 1/10 un dixième
3/4 ezintathu iikota
2/5 ezimbini cinquièmes
Imithetho embalwa yeNdlela
1. Ngaphandle kwee- half , tiers , kunye ne- quarter , zonke iinqhezu zeFransi zisekelwe kumanani abo amakhadi ahambelana nawo. Qaphela ukuba xa inani lekhadikhadi liphela -e, loo leta iyanqatshwa ngaphambi kokuba iqhezu iphele.
inombolo yekhadikhadi yehlisa i-e yokugqibela (ukuba ikhona) yongeza-yesibili
Ntandathu Ntandathu yesithandathu
inye kwi-onz onzième
2. I- half ingaba ngumfazi xa isetyenziswe njengegama okanye xa ilandela igama. Kodwa xa i- demi ilandele isibizo, ihlala ihlala kwifom. Zonke ezinye iziqhekeza zaseFransi zihlala zisemasimini kwaye zimele zilandelwe ngenani. Ukuba zilandelwa libizo, i-preposition de ifakiwe njenge-go-between.
3. Inkulumbuso ("yokuqala") yile nombolo yodinal kuphela enokuthi ibe yindoda okanye isetyhini: inkulumbuso (isintu) kunye neyokuqala (isetyhini). Qaphela ukuba amashumi amabini anesibini, ama-thirty-yokuqala kunye anjalo ahlala esilisa.
Qaphela ukuba utshintsho lweelwimi luvela kwi- 5 ukuya kweyesihlanu kunye ne- neuf ukuya kwi- neuvième.
Amanani amiselweyo ayasetyenzisiweyo kwimini yesiFrentshi, ngaphandle kweyunkulumbuso.
Ukuguqula ingqungquthela yekhampani ezifana neekota ezintathu kwisipelisi, faka i-hyphen, njengale: i-violin ezintathu-quarts -violin-size size
Iziqendu kunye neenombolo zomnxeba zichazwe ngokuhlukileyo. Iqhekeza elinesihlanu liyakwazi ukugqitywa kuphela nge- 1/5 , kanti i- fifthinal ordinal iyancishiswa ku- 5e .
IsiNgesi saseMerika ukuya kwisiBritish IsiNgesi Isigama
Indlela yokudibanisa "Preparer" (ukulungiselela) ngesiFrentshi
Liphi Iveki Eyingcwele?